[14 / 02 / 2020] Halkalı Miatrika ny Tender faharoa ao amin'ny tsipika hafainganam-pandeha Kapıkule	22 Edirne
[14 / 02 / 2020] Mitohy ny fanandramana fitsapana amin'ny Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line	34 Istanbul
[14 / 02 / 2020] Konya Metro dia nanomboka tamin'ny 1,2 Billion TL	42 Konya
Andro: 8 Desambra 2019
Ora amin'ny Izmir Metro
İzmir Metro Ora: İzmir Metro dia niasa ambanin'ny tany sy tany ambanin'ny tany ary fitaterana ambanin'ny tany tao anaty tanàna nandritra ny taona maro. İzmir, izay manana tamba-jotra maro be [More ...]
Hisy gara ve ao amin'ny distrikan'i Gürsu any Bursa?
Hisy gara ve ao amin'ny distrikan'i Gürsu ao Bursa ?; Raha ny lanonana fanarahan-tany dia natao tao amin'ny 2012, ny gara iray 2 no hita mialoha tany Bursa, ny iray ao Balat ary ny iray ao Gürsu. farany [More ...]
Ahoana ny fiaran-dalamben'i Bursa; Tamin'iny herinandro lasa iny,… ny Vaomieran'ny drafitry ny teti-bolan'ny Tahirim-pirenena Tiorka dia miresaka momba ny teti-bolan'ny Ministeran'ny fitaterana. Ny lefitra sady lefitry ny lefitry ny Antoko Bursa an'ny antoko GOOD, Prof.Dr. Dr. Askedsmail Tatlıoğlu nanontany an-kalalahana ny lefitry ny minisitry ny 2: yapılan Made in Bursa [More ...]
Azonay fa ny mpanao politika sy ny ben'ny tanàna, dia mampiditra ny fanantenany amin'ny fitaterana an-dalamby mankany Istanbul na Ankara sy ireo ben'ny tanàna ao Ankara, ary natsangana tamin'ny fandaharan'asan'ny fampiasam-bola. … Eto ihany koa dia tsapa ny tanjon'ny famokarana indostrialy any amin'ny faritra Central Anatolia ho tonga ao amin'ny seranan-tsambo amin'ny lalamby, fa ho an'i Bursa [More ...]
Ny tetikasan'ny fiaran-dalamby ao Bursa dia hotanterahina miaraka amin'ny trosa ivelany; Ny sary hosodoko dia fantatra ankehitriny Roa misy dingana roa ao amin'ny lalamby lalamby Bursa-Yenişehir-Osmaneli. Ny sangan'asa fanamboarana fotodrafitrasa voalohany amin'ny tsipika Bursa-Yenişehir dia nanatona ny isan-jaton'ny 70. Torohevitra vitsivitsy, na dia fivoarana lehibe aza [More ...]
2020 Loharanon'ireo mpilatsaka hofidina izay hanao atrikasa fampiofanana arak'asa amin'ny TÜVASAŞ General Directorate dia efa nambara.
Filohan'ny Biraon'ny TCDD sy ny Tale Jeneraly Ali İhsan Uygun, mpanampy amin'ny ankapobeny ary ny delegasiona miaraka aminy dia nanao fandinihana tao amin'ny tsipika fiaran-dalamby ao Ankara Sivas. İhsan Uygun, orinasa momba ny fizotran'ny fivoarana [More ...]
Nandritra ny fihaonany tamin'ny Minisitry ny tontolo iainana sy ny drafitra an-tanàn-dehibe Murat Kurum, mba hamoahana vahaolana mazava ho an'ny olan'ny fitaterana, 27 voalohany ary avy eo dia hovidiana ny fiara 175 ary hovitaina ny fiara fitateram-bahoaka. [More ...]
Eskişehir Metropolitan Vehivavy Manampahefana Parkomat Hahazo; Eskişehir Metropolitan Municipio dia nanambara vao haingana fa hampiasa ireo mpamily bus vehivavy amin'ny fizarana ny kaonty media sosialy sy ny vehivavy mpilatsaka ho an'ny mpamily izay mahafeno ny fepetra takian'ny kaominina [More ...]
Bursa Metropolitan Monisipaly orinasa fitaterana Burulaş toerana ao amin'ny Ranomasina Bursa Buses (BUDO), Torkia Basketball 1. Lasa mpanohana anarana amin'ny Gemlik Basketball Club. Manome efitrano fanatanjahantena ho an'ny andrim-pampianarana any Bursa, am-pankasitrahana [More ...]
Torkia, izay efa an-tserasera hatramin'ny 1973 taona sy fitaovam-panorenana mameno ny banga eo amin'ny tena zava-dehibe voalohany, ary fitaovana vaovao ihany katalaogy FANORENANA CAREERS vakizoro ny katalaogy, izao velona! CATALOG TRANO, midadasika [More ...]
Ankara Batıkent Metro Map Lalana sy Taratasy tapakila - M1 BATIKENT METROS - Ny fananganana metro metro voalohany ao Ankara dia nanomboka tamin'ny 29 martsa. 1993 metro andalana hita eo amin'ny lalan'ny Kızılay Batıkent [More ...]
Ankara Keçiören Metro Map Lalana sy Saham-bokatra M4 KEÇİÖREN METROSU - Ny fanamboarana ny tsipika metro amin'ny làlan'i Kızılay Gazino nanomboka tamin'ny 15 Jolay 2003. Rehefa tsy nahavita ny Fokontany Ankara Metropolitan [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara 8 Desambra 1874 Agop Azarian Company dia nanolo-tena tamin'ny famitana ny volana 12 ho mpitsangatsangana ho an'ny fanorenana ny làlan'i Belova-Sofia.
Mihetsika ny roon-tsoratry ny fikorontanana voalohany manerantany voalohany manerantany i Nord!
Mitohy ny fanandramana fitsapana amin'ny Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line